लिचि खानु लाभ वा हानि? - eNepal
लिचि खानु लाभ वा हानि?
by enepal २०७८, ११ जेष्ठ मंगलवार 288
चितवन, जेठ-११। लिचि गर्मीमा पाइने एक प्रमुख फल हो । मिठो र रसिला हुनुले पनि यसलाई मन नपराउने कमै हुन्छन् । मिठो र रसिलो हुनुका साथै स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
लिचीमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी, भिटामिन ए र बी कम्प्लेक्स प्रसस्त पाइन्छ । यसका साथै पोटासियम, क्याल्सियम, फस्फोरस र आइरनजस्ता मिनरल पनि पाइन्छ । दैनिक रूपमा लिची खानाले अनुहारमा चमक आउनुका साथै बढ्दो उमेरको कारण देखिने लक्षणहरू समेत अनुहारमा कम देखिन्छ । यसका साथै शारीरिक विकासका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । तर, लिची खाने बेलामा ध्यान भने पुर्याउनुपर्छ । किनकी अधिक मात्रामा लिची खानाले बेफाइदा गर्न सक्छ । धेरै लिची खानाले चिलाउने, एलर्जी, र स्वास लिन समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
राजधानीसहित देशका अधिकांस स्थानमा गर्मी बढ्दो छ । यो समयमा बजारमा विभिन्न प्रकारका फलफूल पाइन्छ । यो समय लिचीको पनि मौसम हो । लिची स्वास्थ्यवर्धक हुनुका साथै यसमा प्रसस्तै पोष्टिक गुण पाइन्छ । लिचीमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी र बि कम्प्लेक्ससँगै पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । लिची खाँदा अनुहारमा निखार आउँछ भने चाउरिपन पनि हट्छ ।
लिचीमा पाइने क्याल्सियम, फस्फोरसले बच्चाको शारीरिक गठनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ । लिची आनामा मुटु स्वस्थ हुन्छ भने क्यान्सर सेल्स र ट्युटम पैदा हुनबाट रोक्छ । जसले मलद्धारमा हुने क्यान्सरको खतरा हुँदैन । चिसो लागेको छ र घाटीमा दुकेको छ भने पनि लिची खानु लाभदायक हुन्छ । धेरै फाइदाजनक भएपनि लिची सिमित मात्रमा मात्र खानुपर्छ । धेरै खाँदा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । एक पटकमा १०–११ वटा लिची खानु लाभदायक हुन्छ । यो भन्दा धेरै खाएमा टाउको दुख्छ भने शरीर चिलाउने, जिब्रो र ओठ सुन्निनुका साथै सास फेर्न समेत कठिन हुन्छ ।